Umhlaba ▷ ➡️ Thola ku-inthanethi Online ➡️
Usesimweni somusa ongaphelelwa isikhathi lapho konke kuhamba kahle.
Okushiwo ikhadi «Umhlaba»
La Incwadi Yomhlaba ikhomba ekuhlakanipheni kukamongameli okusekela impilo kulokhu nakuwo wonke umhlaba. Kwizindawo eziningi zeTarot, yisibalo sowesifazane esibe ngumfanekiso wethu ojwayelekile womhlaba. Uvela kwa Isiko lesiHeberu, lesiGnostic ne-Alchemical, futhi phakathi kwezulu nomhlaba njengomama we-cosmic yemiphefumulo, unkosikazi kaNkulunkulu, kanye nomvikeli wethu wamabutho we-karmic esiwakhiphe eMhlabeni ekupheleleni kwethu nokungazi.
Incwadi evela kunkulunkulukazi womhlaba isimema ukuba yisakhamuzi emhlabeni - uma sesibonile amandla omphefumulo wethu ngakho. Imemezela ukuvuswa komphefumulo ongafi womphefumulo, owenziwa ngaphandle kwesidingo sokufa.
Le ncwadi, efana ILanga, inedumela lokungabi nencazelo engemihle akunandaba ukuthi kubonakala kuphi noma kanjani. Uma i-hermetic axiom ingu "Zazi wena," lesi sithombe simele lokho okwaziwayo lapho isimo sangempela somuntu silandelwa enkululekweni yokudala nasekugcwalisekeni kwayo kokugcina.
Yehlisa umoya wazi ukuthi uyaphumelela enhlosweni yakho.
Kungenzeka ukuthi incwadi u-El Mundo te unikeza imvume yokwenza noma yini oyifunayo. Njengamanje, isisusa sakho siseduze nentando yaphezulu. Noma wenza iphutha, kuzoba kuhle kakhulu. Hlala usebenza futhi uqhubeke uqhubekele phambili.
Akunasidingo sokuqhubeka nokubheka noma ukuphazamisa ukuzilawula kwakho ngokubala. Esikhundleni sokufuna ukuvumelana noma ukuvuma kwabanye, mane umdanise. Ngamanye amagama, ziveze, usabele ngokwemvelo, bese uvumele amathayili awele lapho angakwazi khona.
Okubalulekile inhloso yaphezulu. Ukuthi abantu bayakuvuma yini noma cha akubalulekile. Kodwa-ke, uma uvumela i-ego yakho ukuthi ingene, awusasebenziseki ezinhlelweni ezinkulu.